Products – Myanmar Info Hub
in : Camera & Electronic, Products
Live life & Play ဆိုတဲ့ ဆောငျပုဒျကို အတိုခြုပျပွီး LiPlay လို့ Fujifilm က သူ့ရဲ့ နောကျဆုံးပျေါ Instax Mini ကငျမရာအမြိုးအစားသဈကို ချေါတှငျပါတယျ ။5Megapixel Resolution ရှိ မွငျကှငျးပုံရိပျတှကေို သိမျးယူပေးနိုငျပွီး အခြိနျ ၁၀ စက်ကနျ့စာ အသံ Audio File တှပေါ တှဲဖကျ Record ပွုလုပျပေးနိုငျမှာပါ ။ Credit Card အရှယျအစားလောကျရှိတဲ့ Instax Film ပျေါမှာ ပွနျလညျ ပုံထုတျယူတဲ့အခါ Photo Frame အတှငျးမှာ QR Code တဈခု ယှဉျတှဲပါဝငျလာမှာဖွဈပါတယျ ။ QR Code ကို LiPlay App နဲ့ Scan ပွုလုပျလို့ ဓါတျပုံနဲ့အတူ …
in : Automobile, Products
အသစ်ထွက်ရှိလာသည့် 2020 Model Mazda2သည် မြောက်အမေရိကဒေသသို့ တင်ပို့သည့် Toyota Yaris အား Mazda Logo တပ်ဆင်ထားသည့် Model ဖြစ်ကာ Refresh Model အနေဖြင့် ထွက်ရှိလာခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းအား ယခင်က Mazda Demio အမည်ဖြင့် ဂျပန်ဈေးကွက်၌ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ Mazda2အမည်ဖြင့် ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်သည်။ အရှေ့ဖက် Grille နှင့် Bumper တို့သည် ဒီဇိုင်းအသစ်ဖြစ်ပြီး အရှေ့မီးကြီးတွင် Adaptive LED နည်းပညာနှင့် DTR စနစ်တို့ ထည့်သွင်းထားပါမည်။ အလင်းထွက်ရှိမှုနှင့်လားရာ စုစုပေါင်း ( ပုံစံ ၂၀ မျိုး ) ကို ထိန်းချုပ်ဖန်တီးနိုင်မှု တို့သည် Mazda ၏ အသစ်ဖန်တီးမှုလက်ရာဖြစ်ပြီး Toyota နှင့် …
Nikon ရဲ့ အောင်မြင်ထင်ရှား လူကြိုက်များတဲ့ Entry-Level DSLR အမျိုးအစားသစ်ဖြစ်တဲ့ D3400 ကို အဆင့်မြှင့်တင်ပြောင်းလဲထားတဲ့ ကင်မရာဖြစ်ပါတယ် ။ D3500 လို့ အမည်ပေးထားပြီး D5600 ရဲ့ ဒီဇိုင်းတည်ဆောက်ပုံနဲ့ အလားသဏ္ဍာန်တူပါတယ် ။ D3400 ကို စင်တင်ပွဲထုတ်တုန်းက Kit Lens အပါအ၀င် ၆၄၉ ဒေါ်လာ ရောင်းချခဲ့ပေမယ့် ယခု D3500 Kit ကို ၄၉၉ ဒေါ်လာနဲ့ ဈေးကွက်တင်ပို့မှာပါ ။ ယခင် EN-EL14a Lithium-ion Battery ကို ပြန်လည် အသုံးပြုထားတယ်ဆိုပေမယ့် Battery Life (CIPA) – 1550 အထိ ရှိလာတဲ့အတွက် ဘက်ထရီသက်တမ်း ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် မြင့်တက်လာတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ ။ A DSLR that’s …
Suzuki AutoCity ( သန်လျင် ) မှာ မော်တော်ကားမျာကို အရစ်ကျ ၁ နှစ်ကနေ ၇ နှစ်အထိ နှစ်ရှည်ဝယ်ယူခွင့် ရနိုင်မယ့်အပြင် ကနဦးပေးသွင်းငွေကိုလည်း ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကနေစပြီး ပေးသွင်းနိုင်မယ့် AYA Super Suzuki Finance စနစ်နဲ့ ရောင်းချပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ၀ယ်ယူသူအနေနဲ့🔹 Suzuki Ciaz ၀ယ်ယူမယ်ဆိုရင် . . . ကနဦးပေးသွင်းငွေ (Down Payment ) ၆,၄၇၅,၀၀၀ ကျပ် ပေးသွင်းပြီး အရစ်ကျ ၇ နှစ်အတွက် လစဉ် ကျပ်ငွေ ၃၆၀,၀၀၀ ပေးသွင်းပြီး ၀ယ်ယူစီးနင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ 🔹 Suzuki Ertiga ၀ယ်ယူလိုသူများအတွက်လည်း ကနဦးပေးသွင်းငွေ (Down Payment ) ၆,၁၀၀,၀၀၀ ကျပ် ပေးသွင်းပြီး …
အပျော်တမ်းဓါတ်ပုံဝါသနာရှင်တွေအတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ အရည်အသွေးမြင့် ခရီးဆောင်ကင်မရာဖြစ်ပါတယ် ၊ XF10 လို့အမည်ပေးထားပြီး 24 Megapixel Resolution ရှိ APS-C Sensor အသုံးပြုထားတဲ့ Premium Compact ကင်မရာပါ ။ ပုံထွက်အရည်အသွေး ကောင်းမွန်တဲ့ Fujinon 18.5mm F2.8 မှန်ဘီလူးကို အသေတပ်ဆင်ပေးထားပြီး 35mm Term နဲ့ တွက်ချက်မယ်ဆိုရင် Focal Length – 28mm ကို ပိုင်ဆိုင်ပါတယ် ။ Max. Aperture – F2.8 ရှိတဲ့အတွက် အလင်းဝင်ရောက်မှု ကောင်းမွန်ပြီး Low-Light စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားပါတယ် ။ Street Photographer တွေအကြိုက်တွေ့မယ့် Specification တွေ ပါဝင်ပြီး ကင်မရာကိုယ်ထည် သေးငယ်ပေါ့ပါးကာ သွားလေရာ အလွယ်တကူ သယ်ဆောင်နိုင်အောင် ဖန်တီးထားပါတယ် ။ …
24 Monthsအထိအတိုးနှုန်း (လုံးဝ) ပေးချေစရာလုံးဝမလိုသည့် အရစ်ကျစနစ်နှင့်အတူ ပထမဦးဆုံးလာရောက်ဝယ်ယူသူများအတွက် လည်းထူးထူးခြားခြားအစီစဉ်များရှိပါတယ်…. Road Show ကာလအတွင်းတွင်ဝယ်ယူပါက ✔️2 years အထိ အတိုးနှုန်းပေးချေစရာမလိုဘဲဝယ်ယူနိုင်ခြင်း။ ✔️အရစ်ကျဝယ်ယူမှုအတွက် 20% သာ Down payment ပေးချေ၍၀ယ်ယူနိုင်ခြင်း။ ✔️5 နှစ်အထိအရစ်ကျစနစ်ကို CB Bank ဖြင့်ချိတ်ဆက်ဝယ်ယူနိုင်ပြီး ပွဲအတွင်းဝယ်ယူပါက သက်သာသော Bank Service Charges ဖြင့်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်. . . ✔️7 Years အထိ Warranty ရရှိခြင်း။ ✔️စိတ်တိုင်းကျကားအလှဆင်လိုသူများအတွက် Car Accessories7% အထိ Discount ရရှိမည်ဖြစ်ခြင်း။ ✔️ရန်ကုန်လိုင်စင်၊၀ယ်ယူသူအမည်ပေါက်အတွက် Charges ထပ်မံပေးသွင်းစရာမလိုသည့်အပြင် ✔️လူကြီးမင်းလက်ရှိစီးနေသည့် မည်သည့်ကားအဟောင်းနှင့်မဆို လဲလှယ်ဝယ်ယူနိုင်ခြင်း အစရှိသည့်အခွင့်အရေးတို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် ✔️ထို့ပြင် ပထမဦးဆုံးဝယ်ယူသူ (10) ဦးမှာ Early Bird Special …